Full Video Aragtiyaha ah iPhone 6s (Plus)
Wararka xanta ah ayaa la soo baxay oo ku saabsan iPhone jiilka xiga sannadkii la soo dhaafay, taas oo la filayo in la sii daayay September this. Sii arrimuhu ka 2014-kii markii Apple bilaabay iPhone 6 & 6 Plus, waxaa la filayaa in Apple sii daayo doonaa iPhone laba sanadkan sidoo kale. Waxaa lagu wadaa in loo magacaabo iPhone 6s iyo 6s Plus (ama iPhone 7 tan waxa aanu rogo Ha carrabka si sahal ah). Qorshahaa waxa ka mid ah iPhone cusub lama filayo in la beddelo. Sida laga soo xigtay taariikhda daayo hore iPhone, design iPhone kaliya badala labada jiil kasta.
iPhone 6s Fikradda
Size screen ayaa la filayaa in ay sii 4.7 inches - isla sida baaxadda iPhone 6. Qaar ka mid ah isbedel dibadda ayaa la filayaa in la sameeyo. Erayga hareeraha magaalada waa in Apple bixin doonaa doorasho cusub ee midabka loo yaqaan kacay dahab. Camera ayaa dhabarka ayaa la filayaa inuu la 12MP la casriyeeyay ka 8MP hadda taas oo horumar weyn. Waxaan ka filan karto 4K video duubo on camera danbe. Waxaan sidoo kale la filayaa in ay arkaan casriyayn ah in 2GB ee RAM ee processor A9 ah, ka 1GB ah ee hadda ka jirta A8 ah. Makarafoonka oo dheeraad ah ayaa la filayaa in lagu daro dhabarka loo wanaajiyo tayada codka. 6s iPhone The (Plus) ayaa sidoo kale warar xan ah oo in la gaarsiiyo aqoonsiga Touch oo yaraynaysa khaladaad reading oon wanaajinta waayo-aragnimo Apple Pay.
Wararka xanta ah oo laga helay ilo kala duwan ayaa soo wariyay in 6s iPhone (Plus) ayaa la filayaa in ay ku daraan ka technology Force Touch. The feature Force Touch markii ugu horeysay lagu soo bandhigay la Watch Apple kaas oo cabiraya heerka cadaadiska ama ciidan ka dalbatay by waji cusub. Iyadoo dheer ee dareemayaal ciidamada qalabka, iPhone cusub ayaa la filayaa inuu wax yar ka sii dhumuc weyn. Images iyo schematics ayaa xaday shaqaale ah ee sahayda waaxda silsiladda Apple ee Shiinaha. Images ayaa muujinaya in 6s iPhone (Plus) wuxuu noqon doonaa 0.2mm sii dhumuc weyn tahay iPhone 6 (berdihii. 2). Iyada oo ku saleysan liig ah, guddiga macquulka ah ee ay u muuqataa in ay yar yar taas oo ka dhigaysa in ay ku daraan qolka batari wax yar ka weyn. Sidaas awgeed, waxaan la kulmaan daa'in ah batari wax yar ka weyn.
iPhone 6s (Plus) Fikradda
Warka belefta ah leeyahay in size screen ee 6s iPhone (Plus) ayaa la filayaa in ay sii 5.5 inches taas oo la mid ah sida baaxadda iPhone 6 Plus. 6s iPhone The (Plus) ayaa la filayaa in ay xukun wireless oo la soo bandhigay la Watch Apple ah taas oo runtii ku haboon. The yar oo silig ka jira, nolosha fudud yahay. Iyada oo ku saleysan schematics xaday, qalab cusub ayaa la filayaa in ay ka sii dhumuc weyn jiifku taas oo 0.2mm ka sii dhumuc weyn iyo 0.15mm muddo ka badan 6 iPhone Plus.
Dhowrkii bilood ka hor, Apple la siiyo patent ah oo lagu magacaabo qalabka elektarooniga ah dabacsan oo ay ku Patent- United States iyo Astaanta Office (USPTO). Sidaas arrin suurto gal aynu ka filan kartaa in aad aragto iPhone dabacsan guryaha dabacsan iyo qaybaha gudaha. Waxaa jiray badan oo ka mid ah aragtiyaha in lagu sabayn ku dhawaad ​​in ku lug leedahay aqoonsiga Touch la dhisay galay shaashadda oo hadda deggan in ka iPhone dhawaan 'button Home.
Video Aragtiyaha ah iPhone 6s (Plus)
[Watch iPhone 6s (Plus) Fikradda video halkan ]
Video Tani waxay ku siinaysaa aragti ku saabsan wararka xanta ah ee ku hareeraysan 6s iPhone (Plus). iPhone 6s (Plus) waxay yeelan doonaan size screen ee 4.7 inches ah, halka 6s iPhone Plus yeelan doonaan size screen ee 5.5 inches ah. Fiidiyowga ayaa markaas ku aado si uu ugala hadlo sida loo cabbiro iPhone isku Khilaafsanyihiin iyo sida iPhone cusub say ahaan marka la barbardhigo iPhone kale iyo sidoo kale sida ay u adkaysta iPhone uu noqon doono. Waxay kaloo ka hadlaysaa sida ay u fududahay in la garab lahaa iPhone 6s cusub (Plus) la iWatch Apple iyo qaababka kala duwan.
Maxay dadka leeyahay?
Dadka waxay jecel yihiin video iyo waxaa jira in ka badan 5 milyan oo qof, kuwaas oo aan u daawaday ilaa hadda.
2. 6s iPhone (More)
Video Tani waxay ina tusinaysaa iPhone cusub oo ku weydiinayaa haddii ay ku 6s iPhone soo socda (Plus). Markaas, wadahadalo video ku saabsan xabsi jebinta iPhone iyo sidoo kale design iyo kamarad Details of iPhone soo socda. Video ayaa ku daraa oo ku saabsan dad badan oo ka mid ah darroor cusub ku wareegsan iPhone cusub iyo waxa aan ogaado waxa ku saabsan ilaa hadda.
Dadka waxay jecel yihiin video, sababtoo ah waxay ku caawisaa ogaan badan oo ku saabsan naqshadaynta iyo kamarad ah muuqaalada iPhone soo socda.
3. 6s iPhone (More)
Waxuu video ku saabsan qaababka kala duwan ee aan filan iPhone soo socda si ay leeyihiin, ka heerka kala iibsiga xawaaraha xogta sida khafiif telefoonka noqon lahaa. Dadka filan 6s iPhone (Plus) si ay leeyihiin Shell dibadda ah xoog iyo is-dhexgalka Force Touch; kuwo kale.
Tani video gaaban waa la jecel yahay dadka sida ay kaa caawinaysaa in aad ogaato dhamaan saabsan iPhone 6s soo socda (Plus) si deg deg ah.
4. 6s iPhone (More)
Video Tani kulminna waxay dhammaan sifooyinka muhiimka ah ee iPhone soo socda. Falanqeynta Kulamada Xiisaha Tani qoreysa in aan weli garan oo dhan iyo dhammaan wararka xanta ah ee ku hareeraysan iPhone soo socda.
Tani waa video weyn in la ogaado oo ku saabsan iPhone soo socda oo aad u hesho su'aalaha aad ugu jawaabay.
5. 6s iPhone (More)
Video wuxuu dulmar dhan qaababka filaysaa in iPhone soo socda. Tusaale ahaan, 6s iPhone (Plus) ay u badan tahay waxay yeelan doonaan RAM ka badan laakiin tan iyo Apple umana muujiyo RAM ku saabsan wixii qalab ah, waxaan dhab ahaan kuuma sheegi karo ilaa iyo inta uu ka soo baxay oo aan u tijaabiyo. Wararka xanta kale waa in 6s iPhone (Plus) wuxuu noqon doonaa qof dabacsan - 6 iPhone ma aha.
Haddii aad raadineyso weeyna ka qaaddid oo kala duwan oo ku saabsan waxa ay ka sugayaan iPhone soo socda, meeshiisiina waa tan.
6. 6s iPhone (More)
Wadahadal video Tani waxay ku saabsan wararka xanta final ku wareegsan iPhone soo socda ka hor furitaanka bisha soo socota. Tusaale ahaan, iPhone 6s (Plus) ayaa la filayaa in ay processor ka wanaagsan. Waxaan aadan hubin inta farqiga u noqon doona, laakiin waxa ay u hubiso in uu noqon doono si dhakhso ah.
Haddii aad raadineyso macluumaad daqiiqadii ugu dambeysay ee ku saabsan waxa ay ka sugayaan iPhone cusub, waxaad ka fiirin kartaa this video.
7. 6s iPhone (More)
Halkan xulka Macworld ka hadlaysaa ku saabsan oo dhan wararka xanta ah ee cusub. Sida waa ka Macworld, aad hubto in ay arkaan oo kaliya macluumaadka lagu kalsoonaan karo oo ka qaaddid oo sax ah oo ku saabsan waxa aad filan karto (Markaasaa karin) ka iPhone soo socda. Tusaale ahaan, 6s ka iPhone (Plus) Plus yeelan doonaan nolol batariga ka badan iPhone 6. Sidoo kale, 6s iPhone (Plus) Plus ayaa la filayaa in ay xukun wireless.
Dadka waxay jecel yihiin this video maxaa yeelay waxa ay leedahay koox Macworld ka hadlo qaababka dheer weyn oo waa watch weyn.
8. 6s iPhone (More)
> Wadahadal video Tani waxay ku saabsan 6s iPhone cusub (Plus) Pro iyo Apple iPad ee TV 4, hadalka ku saabsan sida ay u dhexgalaan karaa kasta oo kale. Waxa uu ka hadlayaa sida qalabka Apple ayaa bedelay sanadihii la soo dhaafay.
Tani waa waa daawan haddii aad rabto in badan oo ku saabsan Apple hannaanka ugu dambeeyay og.
9. 6s iPhone (More)
Wadahadal video Tani waxay ku saabsan Touch Force ee iPhone cusub iyo sida ay u shaqayso. Video waa ahanno iyo bandhigaysaa sawir cad oo ku saabsan muujinta ah.
Haddii aad raadineyso in badan oo ku saabsan feature Force Touch ogyahay, tani waa video ah.
10. 6s iPhone (More)
Video Tani waxay ka hadlaysaa muujinta USB karo in iPhone soo socda. Waxay kaloo ka hadlaysaa sida shuqullada adabtarada awood 2A cusub iyo sida aad u isticmaali karto feature USB ah.
Waayo, kuwa raadinaya in ay ka badan oo ku saabsan muujinta USB karo iyo sida ay u shaqayso ogyahay, tani waa video inuu soo jeedo.
Halkan waxaa ku qoran video comments in waxaan gartay inuu xiiso leh:
[Fiiro Gaar ah: comments aad u yar ku Web waa wax dhisaya.]
1. "Inkastoo arrimo la yaab leh ugu maaraynta RAM, Waxaan u arkaa wax isbedel dhab ahaan soo dhaweynayaa in ay laba jibaar RAM ah, tan iyo markii ay isticmaali 90% ugu badan waqtiga." - Nahid Islam
1. "Waxaan ogaaday in kaliya" 6S "dhawaaqyada badan sida" Guusha ". Rajaynaynaa in ay isticmaalaan pun in taabanaysa isu-diridda ah!" - Chris Cringle
2. "Haddii Apple casriyaynta 6S in ay 2GB ee RAM iyo burooyin camera ah 12 xildhibaan oo leh af 1.8 ama 1.9 aperture sida aad xusay waxa laga yaabaa in casriyayn ah aad u faa'iido badan in dadka isticmaala Apple." - Rob Wakins
> Resource > iPhone > Full Video Aragtiyaha ah iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus